Hodinihinay tsara ny Apple Music | Vaovao IPhone
Vaovao IPad | | Apple Music, iPad, About us
Tapitra ny tsaho. Apple dia niandry anay mandra-pahatongan'ny "One More Thing" nalaza hilazana amintsika momba ny Apple Music, ilay serivisy mozika mivantana izay noresahan'ny rehetra ary izany dia midika fiatoana amin'ny filaminana eo amin'ny tsenan'ny mozika an-tserasera, ary toa izany no izy izany dia ho. Raha tsy misy ny fanaporofoana ny fomba fiasan'ny Apple Music, dia te hiditra amin'ny indostrialy amin'ny alàlan'ny varavarana fidirana, varavaran'ny tompon-daka izy, Apple Music dia mampanantena zavatra betsaka ary amin'ny Cupertino dia matoky izy ireo fa izy ireo no tsara indrindra omena antsika telo volana maimaimpoana mba hahatonga antsika hiankina amin'ny tolotra mozika ataon'izy ireo. Ny fanontaniana dia hoe, azonao atao ve ny tsy misy azy aorian'ny telo volana? Ao amin'ny Actualidad iPad dia mamintina ny tsara indrindra amin'ny Apple Music isika.
1 Inona ny Apple Music?
2 Inona no mampiavaka an'i Apple Music?
3 Beat 1 Radio, Ho anao sy Siri
4 Rahoviana, ohatrinona ary ohatrinona?
Inona ny Apple Music?
Apple dia serivisy mozika mivantana, mety hieritreritra isika fa toy ny hafa rehetra, saingy tsia, Apple dia zatra tsy manao zavatra mahazatra. Ny serivisy Apple Music dia hanome ny fomba fihainoantsika mozika, mihoatra ny zava-misy amin'ny famoronana ny lisitray manokana sy ny fitendrena hira, Apple dia mikasa ny hanao ny Apple Music ho fampiharana eo anelanelan'ny rindranasa, miaraka amin'ny tambajotra sosialy misy ireo mpanakanto, fomba iray hahitana mozika isan'andro ampiarahana amin'ny rafitry ny mozika ho an'ny fotoana izay mitendry mozika andiany voafantina amin'ny fotoana mety.
Inona no mampiavaka an'i Apple Music?
Ao anatin'ny fampiharana dia hanana a fizarana antsoina hoe "Connect" izay nanazavan'ilay mpanakanto Drake nandritra ny WWDC 15 fa ho lohataona mivantana amin'ny "tambajotra sosialy" tokana izy mba hahafantaran'ny mpitendry mozika izay tadiavin'ny mpankafy azy sy hanome azy ireo vaovao mivantana amin'ny alàlan'ny atiny manokana amin'ny endrika sary, hira, lahatsoratra ary horonan-tsary. Azo antoka fa te-hitondra akaiky indrindra ny mpankafy sy ny mpanakanto i Apple. Misaotra an'io fa tsy ho lasa mpilalao mozika mivantana fotsiny ny Apple Music fa toerana ahafahantsika mitazona hatrany ny vanim-potoana miaraka amin'ireo hetsika farany ataon'ny olo-malaza amin'ny tontolon'ny mozika.
Ny fahafahana miditra katalaogin'ny iTunes iray manontolo Tsy isalasalana fa iray amin'ireo fananana lehibe an'ny Apple Music izy, ary izany dia tsy misy katalaogin'ny mozika virtoaly lehibe kokoa noho ilay notanan'i Apple.
Beat 1 Radio, Ho anao sy Siri
Ity onjam-peo ao anatin'ny faritra «Radio» amin'ny fampiharana Apple Music ity dia ho radio an-tserasera 24/7 izay handefa ny hira malaza indrindra eran'izao tontolo izao, misy ny gara any an-tanàna (hanomboka any Angletera, Aostralia ary Etazonia) miaraka amina karazana kanto sy mozika manamarina ny tantara fohy nananan'i Beats Music. Etsy ankilany, For You dia ho fomba vaovao hijerena ireo hira an'arivony sy an'arivony tsy mila mandany fotoana, amin'ny alàlan'ny famenoana fanontaniana fohy dia hisafidy ireo hira ireo ny algorithm arakaraka ny fitiavantsika mozika, ahafahantsika mahita mozika isan'andro hahafaly ny tenantsika.
Siri dia iray amin'ireo mpahazo tombontsoa lehibe amin'ity WWDC 15 ity ary nihatsara fatratra, noho izany manomboka izao dia ho tafiditra tanteraka amin'ny Apple Music izy io amin'izay ny fangatahana azy fotsiny dia afaka mamerina ilay hira tadiavintsika na ny gara izay tena tiantsika indrindra.
Rahoviana, ohatrinona ary ohatrinona?
Hivoaka ny Apple Music amin'ny 30 Jona miaraka amin'ny fanavaozana ofisialy ny firmware firmware an'ny iOS 8.4 ary ho avy hapetraka ao amin'ny rafitra fandidiana izany. Raha efa honohono ny fanavaozana farany ny iOS 8.4 dia hahemotra amin'ny fandraisana Apple Music ary efa nisy izany.
Na izany aza dia nanambara izany i Tim Cook Apple Music dia ho serivisy multiplatform azo idirana amin'ny alàlan'ny Internet sy amin'ny alàlan'ny fampiharana azy ho an'ny Windows sy Android, ity farany noho ny antony marim-pototra dia nihemotra mandra-pahatongan'ny daty tsy voafaritra amin'ny faran'ny taona, noho izany Apple Music dia tsy hoferana ho an'ny mpampiasa ny Apple suite, izay andehanany fotsiny mba ho teboka iray manandanja ho anao.
Voamarina ihany koa fa Apple Music hanana maody ivelan'ny serananaNoho izany, azontsika atao ny misintona ny mozika ankafizintsika mba hividianana azy amin'izay toerana ilantsika azy, amin'ny fiheverana ny tahirin'ny data raha toa ka manapa-kevitra ny hitahiry ireo lisitra na hira ireo amin'ny alàlan'ny fifandraisana WiFi isika.
Ny vidiny, angamba ny zava-dehibe indrindra ary izay natahoran'ny maro hahafantatra an'i Apple, satria nahagaga antsika izany, Ity ny drafitry ny vidin'ny Apple Music:
Telo volana voalohany an'ny famandrihana maimaim-poana.
Famandrihana isam-bolana an'ny 9,99 € ho an'ny mpampiasa
Famandrihana isam-bolana an'ny 14,99 € ho an'ny mpampiasa 6 hatramin'ny rafitra En Familia.
Ny famandrihana isam-bolana ho an'ireo mpampiasa Fianakaviana dia tsy isalasalana fa ho laharana iray hafa amin'ny fifaninanana satria vidiny mifaninana tokoa ho an'ireo tokatrano izay te hanana ny mozika rehetra amin'ny fitaovan'ny mpianakaviny rehetra. Miaraka amin'ireo fepetra rehetra ireo dia mikasa ny hahatratra mihoatra ny i Apple Famandrihana 100 tapitrisa amin'ny vanim-potoana fandefasana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Music » Hodinihinay tsara ny Apple Music
watchOS 2 dia mitondra Lock Lock ho an'ny Apple Watch
Apple Music dia ho hita manomboka amin'ny 30 Jona